Vaovao - Ny mahasamihafa ny hety nify biby fiompy sy ny hety fisaka.
Ny mahasamihafa ny hety nify biby fiompy sy ny hety fisaka.
Amin'ny salon volo isan-karazany, ny hety nify sy hety fisaka dia matetika ampiasain'ny mpanao volo. Raha ny marina dia afaka mividy hety nify sy hety fisaka isika. Azontsika atao ny mikarakara manokana ny bangs amin'ny fotoana mahazatra. Tsy mila mankany amin'ny fivarotana mpanety matetika isika hanamboarana ny volontsika. Azonao atao ihany koa ny manety ny volon'ireo biby fiompinao. Aorian'izay, ampahafantaro ny tsy fitoviana amin'ny hety nify biby fiompy sy hety fisaka.
Ny mahasamihafa ny hety nify sy ny hety fisaka
Ny hety nify dia hety misy lelan-serrated amin'ny lafiny iray, toy ny fikapohana hety, hety fanindriana, hety borosy, sns, izay anarany anarany. Ny fiasan'ny hety dia ny manampy manify ny volo ary manalefaka ny volo matevina nefa tsy manova ny halavan'ny volo amin'ny ankapobeny. Ankehitriny dia misy karazany roa ny hety, ny iray dia hety tokana ary ny iray kosa hety misy lafiny roa.
Hety mahazatra ny hety fisaka. Tsy mitovy amin'ny hety nify izy ireo. Antsy izy ireo amin'ny lafiny roa. Ny tena andraikitry ny fanetezana fisaka dia ny fanampiana ny olona MM hanapaka volo fohy, ary tsy afaka manome ny volo hanapaka vokatra hafa. Saingy, amin'ny fiainantsika andavan'andro, matetika isika dia mampiasa hety fisaka ary ny hety dia amin'ny toe-javatra manokana ihany.
Fomba fampiasana hety nify sy hety fisaka
Ny fomba fampiasana hety nify sy hety fisaka dia mitovy amin'ny ankapobeny, izany hoe, rehefa manapaka volo dia diniho aloha ny toerana sy ny volon'ny volo hokapaina, ary avy eo apetaho eo amin'ny sisin'ny volo ny lafiny henjana amin'ny hety. manapaka. Ny volo izay tsy nokapaina dia azo zaraina ho bundle kely maromaro aloha, ary avy eo apetaho amin'ny clip kely eo an-tampon-doha, ary apetraho ilay fonosana izay tokony hokapaina. Amin'izany fomba izany, ny volo dia toa milamina sy hierarchical, Tena tsara ny vokany. Fa mm amin'ny "antsy" tena izy, isaky ny tsy tokony ho be loatra ny volom-bolo, mba tsy "Miss" tapaka dia tsy tokony hanapaka ny volo oh.
Ahoana ny fakana ny hety sy hety fisaka
Ny rantsantanana ankihiben-tànana sy ny rantsantanana dia tokony hampiasaina ho hety lehibe, fa ny rantsan-tànana hafa kosa dia mitana andraikitra matanjaka. Ataovy ao anaty ireo "lavaka boribory" roa mifanentana amin'ny hety ny ankihiben-tànanao sy ny rantsan-tananao, ary aondriho ireo rantsan-tànana hafa hitazomana ny hazon'ny hety. Amin'ny ankapobeny, ny fitarihana ny hety dia fehezin'ny ankihibe, raha ny haben'ny hety sy ny herin'ny fanetezana dia fehezin'ny rantsantanana hafa. Mila mitandrina dia, mm rehefa mampiasa hety nify izy ireo hitandrina ny nify, notapahina ny volo lava ny volo, tsy afaka mamindra Oh, raha tsy izany manapaka ny volo dia ho tena ratsy tarehy.